Caalamka Maku Deg-Degay Qaadista Cunaqabateynta Hubka Soomaaliya? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Caalamka Maku Deg-Degay Qaadista Cunaqabateynta Hubka Soomaaliya?
Caalamka Maku Deg-Degay Qaadista Cunaqabateynta Hubka Soomaaliya?
November 24, 2013 - By: Khalid Yusuf
Cutubyo ka tirsan Ciidamada cusub ee Dowlada Federaalka Soomaaliya
6dii bishii Maarso ee sanadkan 2013 ayuu Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay isku raacay in la qaado qeyb kamid ah Cunaqabateyntii hubka ee Saarneyd dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 xiligaasi oo uu socday dagaalkii Sokeeye ee Soomaaliya, hadaba 9 bilood kadib go’aankaasi ma noqday mid la asiibay mise wuxuu noqday dib lagu khasaaray?
Bishii Feberaayo ayey ahayd markii Dowlada Soomaaliya si rasmi ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ka codsatay in laga qaado cunaqabateynta hubka si dib loogu dhiso ciidamadii Qaranka Soomaaliya, arrintan ayaa waxaa si weyn u taageertay dowlada UK oo xiligaasi Golaha amaanka soo hordhigtay Qoraalka cunaqabateynta hubka fudud looga qaaday Dowlada Soomaaliya, kaasi oo bil kadib golaha Amaanka si buuxda u ansixiyey.
Qaraarkii lagu qaaday cunqabateynta lanbarkiisu ahaa  ayaa dhigaya in muddo sanad ah Soomaaliya laga qaado xanibaadda hubka, waxaana qaraarkani dhigayaa in weli ay mamnuuc tahay in dowlada Soomaaliya soo gadato hubka qaarkiis sida Miinda loo yaqaan Anti-Tank, Hoobiyaasha culus, gantaalada diyaaradaha lagu soo rido, madaafiicda culus ee Hawsarka loo yaqaan iyo kuwa goobta. Qaraarkan ayaa la sheegay in uu yahay mid tijaabo ah isla markaana la eegi doonaa qaabka dowladdu u maareyso hubka gacanteeda soo gala.
Hadaba wakhtigii Tijaabada ahayd ee Dowlada Soomaaliya loo qabtay waxaa ka hartay in ka yar 4 bilood, xili dalka Soomaaliya ay ka dilaaceen dagaalo horleh oo beeleed oo ay si toos ah uga qeyb qaadanayaan ciidamadii cusbaa ee dowlada Soomaaliya tababarka iyo hubka siisay.
Tuulooyina badan oo kamid ah Gobalka Shabeelada Dhexe oo ay gubeen askar ka tirsan Ciidamada Dowlada oo hab Qabiil uu dagaalamaya!
Dagaalada ka dhacay Shabeelada Dhexe, Shabeelada Hoose iyo waliba kii ka dhacay magaalada Kismaayo bartamihii sanadkan 2013, ayaa niyad-jab ku riday in badan oo kamid ah wadamadii horey u taageeray in cunaqabateynta laga qaado Dowlada Soomaaliya si loo helo ciidamo Qaran oo hanta amaanka wadanka Soomaaliya guud ahaan.
Arrintan ayaa sabab looga dhigayaa go’aankii ugu danbeeyey ee Golaha Amaanka kasoo baxay 6dii bishan November ee wakhtiga loogu kordhiyey hawlgalada iyo Tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya. Halka codsigii dowlada Soomaaliya ee ahaa dhismaha Ciidameeda uu Golaha Amaanka ansixiyey oo kaliya in Ciidamada Dowlada laga taakuleeyo dhanka Saadka Raashinka iyo Shidaalka, marka ay AMISOM gacanta siinayaan oo kaliya, arrintaasi oo loo xilsaaray inuu maamulo xafiiska UNSOM.
Wasiirka Arrimaha Gudaha & Amniga Soomaaliya oo sheegay inay baarayaan dagaaladii ciidamada ka qeyb qaateen
Fashilaada ku aadan habka loo maareeyey ciidamada Dowlada Soomaaliya oo intooda badan u badan hal beel iyo dagaaladii ugu danbeeyey ay ciidamada Dowlada Soomaaliya kaga qeyb qaateen dagaaladii salka ku hayey qabiilka ee ka dhacay Shabeelooyinka ayaa ah mid muujineysa in weli ay taagan tahay baahidii 1992dii cunaqabateynta hubka loo saaray dalka Soomaaliya.
Walow ay jiraan hub si qarsoodi ah oo dalka Soomaaliya lagu soo geliyo hadana waxaan xiligan macquul ahayn in dowlada Soomaaliyeed ay iyadoo huwan shaati Beelo ay qeyb lixaadleh ka qaadato baro kicinta beelaha ku dhaqan Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe qeybo kamid ah arrintan ayaa ah mid keeni karta in Beesha Caalamka dib uga noqoto go’aankii lagu deg degay bishii Maarso ee cunaqabateynta looga qaaday dowlada Soomaaliya.
Marka loo barbar dhigo sanadihii 2011 iyo 2012 ayaa sanadkan 2013 noqonayaa sanadkii ay dhaceen dagaaladii ugu cuslaa ee dhexmara beelaha oo ka dhaca goobaha dib looga qabsaday xoogaga Al shabaab oo iyagu horey gacanta ugu hayn jiray gobalada ku hareeraysan magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Arrintan ayey usii dheertay khilaafka horleh ee soo dhexgalay Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha Soomaaliya oo muujinaya in weli Dowlada Soomaaliya u bislaan inay noqoto mid ka maran khilaafka qabaa’ilka iyo waliba musuq maasuqa gaaray heerarka ugu sareeya ee dowlada.
Dowlada Soomaaliya ayaa xiligan u baahan inay dib u eegis fiican ku sameyso qaab dhismeedka ciidamada Qaranka Soomaaliya, habka kaliya ee looga bixi karo falalka ka dhacay Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe ayaa ah in ciidanka Qaranka uu noqdo Ciidan Soomaaliyeed balse uusan noqon ciidan hal beel ku kooban, waxayna arrintaasi khatar ku tahay xasiloonida dalka ee mustqbalka hadii aan la helin ciidamo isku dhaf ah oo daacad u ah dowlada Qaranka, walow Madaxdii dowlada xiligan laftoodii lagu eedaynayo inay qeyb ka yihiin murranka siyaasadeed ee aan ka marneyn fikirka Qabiilka, arrintaasi oo iyaduna ah caqabad kale oo dib u dhac ku keenaysa horumarka wadanka Soomaaliya.
Khalid Y. Salah